IFirefox ithatha amanyathelo okumisa isaziso sogaxekile | Ubunlog
Ukuzidlalela iintengiso kunye nevidiyo zivela nanini na, njengo iwindows ocela imvume yokuthumela ii-pop-up windows njengezaziso.
Oku Ingxaki yokuba kwiinyanga ezininzi ngoku Ngokukhawuleza iyangena kubasebenzisi be-Intanethi. Nangona kunjalo, iMozilla yenza utshintsho kule meko. Umbutho ufuna ukutshintsha indlela isikhangeli sayo esijongana ngayo nezicelo zesaziso ukuzama ukunciphisa oku, ukusuka kuhlobo lweFirefox 72, ngokwesibhengezo sabo esithunyelwe ngoMvulo.
Ngapha koko, ngokukaMozilla, IFirefox 72, eza kukhutshwa ngoJanuwari olandelayo, izicelo zokubonisa izaziso zedesktop ziya kuthatha uhlobo lwe icon encinci kwi-URL ye-URL ye-Firefox, Abasebenzisi baya kufuna ukucofa ukuze babone isicelo sesaziso. Okwangoku, ndwendwela iindawo ezininzi ukubonisa izaziso ezinkulu.
Kwakungo-Epreli ophelileyo apho umbutho wenza esi sigqibo sibalulekileyo sokwenza utshintsho ukunciphisa inani lezaziso ezicaphukisayo zokufumana izaziso zedesktop ezibonwa ngabasebenzisi mihla le xa bekhangela.
Ukuza kuthi ga ngoku, iMozilla iqhube uthotho lwezifundo kunye novavanyo oluye lwabonisa ukuba izaziso ezingathandekiyo kubasebenzisi, ngokwe-blog yabo.
Kolu vavanyo, IMozilla iyile umlinganiso isebenzisa i-Firefox telemetry Ukuqokelela iinkcukacha zokuba umsebenzisi uzisebenzisana njani nesicelo, ngaphandle kokuveza iinkcukacha zakhe.
Ixabiso yenziwe kwiqela elingalindelekanga labathathi-nxaxheba (0.1% yabemi bomsebenzisi) kwiinguqulelo zeFirefox, kunye nabo bonke abasebenzisi beFirefox Nightly.
Isifundo seenguqulelo uvumele umbutho ukuba wahlule phakathi kwabasebenzisi abatsha kunye nabasebenzisi abakhoyo, ukuphendula ngokukhethekileyo kubasebenzisi abakhoyo xa besala izicelo zesigunyaziso, kuba bahlala benazo iimvume ezichanekileyo kwiindawo zabo abazithandayo.
Kwakhona, Ngokwamanye amanani ingeniswe ngeposi, abasebenzisi musa ukwamkela izicelo zokwazisa zingeniswe ziiwebhusayithi.
Ngapha koko, ngokukaMozilla,
Kwinyanga enye yohlobo lweFirefox 63, iindwendwe ziziswe nge-1,450 yezigidigidi kubasebenzisi, apho zingama-23.66 ezigidi kuphela ezamkelweyo. Oko kukuthi, kwisicelo ngasinye esamkelweyo, amashumi amathandathu saliwe okanye asihoywa. Kumatyala amalunga nezigidi ezingama-500 kule nyanga, abasebenzisi bathathe ixesha lokucofa u "Hayi ngoku."
Ngokwiposti yebhlogUkongeza kwinto yokuba ivolumu iyonke yezi zinto zikhawulezileyo yawa ngexesha lovavanyo, izikhuthazo eziboniswe njengesiphumo sokunxibelelana komsebenzisi zazineempawu ezifanelekileyo zokuzibandakanya.
Enyanisweni, Umbutho ukwazile ukubona inqanaba elingcono kakhulu lezigqibo zesigunyaziso okokuqala (52%) emva kokufaka isicelo sokunxibelelana komntu ebusuku.
Malunga nesifundo kwiinguqulelo zeFirefox, IMozilla igqibe kwelokuba abasebenzisi abakhoyo baya kwamkela ama-24% Okokuqala kokunxibelelana nomsebenzisi kwaye abasebenzisi abatsha baya kwamkela ama-56% ezinto zokuqala zokunxibelelana nomsebenzisi. Oku komeleza injongo yombutho yokumisa ugaxekile wesaziso sesikhangeli.
Ngokusekwe kwezi ziphumo, IMozilla ifumanise ukuba unxibelelwano lomsebenzisi luyafuneka ukubonisa imiyalezo yemvume isaziso kwaye ndiza kuyiveza isuka kwiFirefox 72.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba IMozilla yayisele iqalile ukwenza izithintelo zenqanaba lesikhangeli, uzibamba njani izaziso kwiFirefox 70. Ngoku xa undwendwela indawo entsha efuna ukubonisa izaziso, iFirefox ithathe indawo ye "Hayi ngoku" kunye no "Ungaze uvumele" ukhetho, ukuze iwebhusayithi efanelekileyo ingasakubonisi izicelo zakho. isaziso.
Ukumisa zonke izaziso kwiFirefox, kungenziwa ngolu hlobo lulandelayo:
Ngokucofa kwi icon yemenyu kwikona ephezulu ngasekunene yesikhangeli, apha sikhetha «Khetha».
Emva koko siklikha ku- "Ubumfihlo nokhuseleko" kwimenyu esekhohlo.
Kuya kufuneka siye phantsi kwicandelo "leemvume" kwaye ucofe iqhosha "Useto" ecaleni kwe "Izaziso."
Jonga ibhokisi ecaleni kwe "Vimba izicelo ezintsha ukuvumela izaziso."
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » ngokubanzi » Izaziso » IFirefox ithatha amanyathelo okumisa ugaxekile wesaziso
UGoogle uqalile ukuvavanya iManifest V3. Ngaba esi iya kuba sisiphelo seBlock Origin?